I. Hordhac Farsamo
Marka hore, isku-darka qalabka '1y XPS' oo leh qalab kale oo caawiye ah oo la mid ah wakiilka nukleantarka iyo midabka midabka; Marka labaadna ku rid hopper of Grade Iextruder by vacuum feeder automatical1y; waxaa ku jira cusbi dhalaalay; Mar afraad ， iyaga oo u dhigaya nidaamka Fasalka IIextrusion si ay u hagaajiyaan, isugu daraan, u dar cadaadis oo mar labaad u qaboojiyaan oo ay ka soo saaraan xumbada sabuuradda caaryo gaar ah oo loogu talagalay guddiga, ka dibna qaboojinta iyo sameynta guddiga iyada oo la qaboojinayo oo la samaynayo. gelinta guddiga nidaamka kala-bixidda Fasalka I iyo u qaadista nidaamka soo-qaadista Fasalada Il silsiladda gaadiidka; Ta lixaad, goynta qashinka qashinka bysaw ee labada dhinac iyo dhameystirka goynta transverse sida ku cad 1ength; tallaabada 1ast, isdulsaarka iyo keydinta.
Khadka Waxsoosaarka Muhiimka ah ee Darbiyada
Shiinaha Amulite Group, AM-WZMZD-3000 * 600 Style Hollow Core Core Panels Production Line oo ay ka mid yihiin: Warshad isku dhafan oo si buuxda otomaatig ah u shaqeyneysa, Nidaam ku shubista, Qalabka Gudiga Qalabka otomaatiga ah ee Mashiinka, Nidaamka Gawaarida Gawaarida Gawaarida, Nidaamka Kaydinta Qalabka.
Lebenada otomaatiga ah ee sameynta Khadadka Waxsoosaarka
AM4-15C Mashiinka sameeya block waa qalab cusub oo si otomaatig ah loo sameeyo oo si otomaatig ah loo sameeyo, oo leh sifooyinka soo socda